News - Cost-irè ogbugba ọgbụgba ọkụ igwe akụkụ ahụ mapụtara, onye na-akwụsị inwe
Cost-irè shot ọgbụgba ọkụ igwe akụkụ ahụ mapụtara, onye na-akwụsị inwe
Na-eche ọnọdụ ahịa na-esiwanyewanye ike na ụlọ ọrụ dị iche iche ihu, ụlọ ọrụ ebutela nnukwu ihe ịma aka maka ọnụ ahịa mmepụta na ihe achọrọ maka ngwaahịa. Usoro ọgbụgba ọkụ na usoro mmepụta bụ njikọ dị mkpa nke na-emetụta ọnụ ahịa ngwaahịa na njikwa mma. A ọmashot ọgbụgba ọkụ igwena nhazi ọnụ ahịa nke akụkụ ahụ mapụtara na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọrụ arụmọrụ na-arụ ọrụ arụ ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ihe na-emetụta ọrụ nkeshot ọgbụgba ọkụ igwe na ọnụ ahịa ịgba ọgbụgba ọkụ.
Ego akụkụ ahụ na-akwụ ụgwọ bụ ngosipụta nke arụmọrụ zuru oke, yana ọ na-emetụta oke n'ime ya. The elu àgwà akụkụ ahụ mapụtara emepụta site TAA ụlọ ọrụ nwere elu gbawara ọsọ na ibu shot ọgbụgba ọkụ ike na otu ike, ọgbụgba ọkụ arụmọrụ na gbawara àgwà bụ elu.It kewara abụọ na edemede: nkedo ịkpụzi na machining ịkpụzi. Ọ na-ahọrọ akụrụngwa dị elu ma nakweere teknụzụ ọgwụgwọ okpomọkụ dị elu iji chịkwaa ịdị ike na microstructure nke ngwaahịa ahụ, na-eme ka ọ dị ogologo ndụ na arụmọrụ dị elu.
Na afọ nke ahụmahụ na nkà na ụzụ na elu ọgwụgwọ ụlọ ọrụ, anyị nwere a ọkachamara imewe na R&D otu na otu nọọrọ onwe ha shot blaster R&D center. All ngwaahịa nwere ike Ẹnam ekese mgbe nlezianya ngwaahịa ule, echichi & debugging tupu ahapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Usoro mmepụta nke akụkụ aka anyị ọ bụla agafeela njikwa njikwa na usoro nyocha dị mma. The ụdị ndị zuru ezu na nwekwara ike ahaziri dị ka onye ọrụ mkpa. Nke a nwere ike belata oke ọnụ ahịa nke akụkụ na ugboro ole nrụzi akụrụngwa, si otú a belata mmezi ọrụ mmezi Ma belata ọnụahịa oge.
TAA Metal etinyewo aka na ụlọ ọrụ ọgbụgba ọkụ ahụ maka ihe karịrị afọ 40 ma jeere ọtụtụ ndị ahịa ahịa. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nke ọkachamara agadi oru injinia ndị maara na nkịtị anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ụdị, na-eme na ojiji nkegbara ọgbụgba ọgbụgba, akụrụngwa oru nkwado, na shot ọgbụgba ọkụ igwe upgrades. Ahụmahụ na teknụzụ niile nwere ntụkwasị obi ma nwee ike inyere gị aka "igbochi obere nsogbu na - edozi mfe maka nnukwu nsogbu" maka akụrụngwa gị.
Post oge: Apr-13-2021